NextMapping | 2020 कार्यको भविष्यको लागि एक प्रवृत्ति
भर्खर हामीले यसमा हाम्रो अपडेट गरिएको रिपोर्ट जारी गरेका छौं कार्यको भविष्य 20 को लागि शीर्ष 2020 प्रचलनहरू। यो लेख 2020 कार्यको भविष्यका लागि एक प्रवृत्तिमा केन्द्रित छ।
हामीले अनुसन्धान गरेका प्रवृति मध्ये एउटा 'पहिलो व्यक्ति' को धाराबाट डिजिटल रूपान्तरणमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
हामीले सर्वेक्षण गरेका धेरै नेताहरूले भने कि तिनीहरू 2020 का लागि डिजिटल रूपान्तरण र विशेष रूपमा डिजिटल एकीकरणमा केन्द्रित छन्।
हाल, औसत कम्पनीसँग 900 भन्दा बढि छ आवेदन एकल प्लेटफर्ममा एकीकृत ती अनुप्रयोगहरूको 26% का साथ व्यापारमा उपलब्ध छ। व्यवसायको लागि ठूलो अवसर भनेको उद्यम भर टेक्नोलोजी एकीकरण गरेर सिलोलाई न्यूनतम गर्नु हो।
चाखलाग्दो डिजिटल एकीकरण कर्मचारी खुशी संग जोडिएको छ - अधिक कि एक कर्मचारी को आवेदन बीचमा सार्न अधिक उसको वा उनको निराशा। निर्बाध डिजिटल एकीकरण भएका कम्पनीहरूले दुबै ग्राहक खुशी र कर्मचारी खुशी बढाउन सक्षम छन्।
जस्तै ब्राण्डहरू Uber र अमेजन कम्पनीहरु को महान उदाहरण हो कि डिजिटल परिपक्व - अर्को शब्दहरु मा, निर्बाध टेक्नोलोजी एकीकरण छ।
२०२० भनेको संस्थाको लागि डिजिटल रणनीतिहरू निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने वर्ष हो जुन 'पहिलो व्यक्ति' मा आधारित छ। यसको मतलव ਭੀडसोर्सिंग, अन्तर्वार्ता, मतदान र सरोकारवालाहरूसँग कुराकानी गर्ने हो। धेरै डिजिटल रूपान्तरण प्रयासहरूलाई असफल बनाइएको छ किनकी यो प्राविधिक व्यापारमा फ्याँकिएको थियो यसले अन्वेषक भन्दा पहिले यसले ग्राहक र कर्मचारीको दुबै अनुभवलाई कसरी असर गर्ने छ।
केहि प्रश्नहरु तपाइँको डिजिटल रूपान्तरण लक्षहरु को बारे मा सोध्नु पर्छ:
हाम्रो डिजिटल यात्राको साथ के काम गर्दैछ?
हाम्रो डिजिटल यात्रामा के काम गरिरहेको छैन?
के हामीले हाम्रा ग्राहकहरुबाट उनीहरूलाई के डेटा चाहिएको हो?
के हामीले हाम्रा कर्मचारीहरू हाम्रो डिजिटल परिवर्तनको साथ चाहन्छन् भनेर डाटा खन्याएका छौं?
हामी कसरी उबेर वा अमेजनद्वारा प्रयुक्त टेक्नोलोजी समाधानहरू लिन सक्छौं हाम्रो ग्राहकहरू र कर्मचारीहरूलाई थप मूल्य दिन?
के हामी लिगेसी प्रणालीमा झुन्ड्याइराख्न दोषी छौं? किन?
के हामीसँग छ? 'परिवर्तन नेतृत्व' योजना जुन हाम्रो डिजिटल रूपान्तरण योजनाको साथ सँगसँगै चल्दछ?
त्यहाँ कुनै प्रश्न छैन कि बढ्दो लागतको डर कम्पनीहरूले डिजिटल समाधान गर्न छोड्छ जसले काम गरिरहेको छैन। सत्य यो हो कि लागतहरू बढ्दछन् जब कम्पनीहरूले लगानी गर्दैनन् 'मान्छे पहिले' डिजिटल रूपान्तरणको दृष्टिकोणमा।